..... CROONER'S ..အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူများအား...ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း....
systems ကို အမြဲတမ်းမြန်ဆန်နေအောင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် အချက်များ...
ကွန်ပျုတာသုံးတဲ့သူ တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ်လောက်ကတော့ ကွန်ပျုတာကို နင်းကန်ခွသုံးဘိုလောက်ပဲသိပြီး လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လုပ်ဘို့ကိုတော့ ပျက်ကွက်ကြတာများပါတယ်....:P
အခု ဒီပို့စ်လေးမှာတော့ ကွန်ပျုတာ System ကိုအမြဲတမ်းပေါ့ပါးမြန်ဆန်နေအောင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်......။
ကွန်ပျုတာကို သုံးနာရီလောက် အသုံးပြူဘို့ အချိန်ပေးနိုင်ရင် System အတွက် အချိန်လေး (၁၅) မိနစ်လောက်တော့ ပေးလိုက်ပါ.........။
ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ ဘာတွေရှိသင့််သလဲ စမယ်.......
(၁) ကွန်ပျုတာကို Virus မဝင်နိုင်အောင် Antivirus Program တစ်မဟုတ်တစ်ခု ရှိရပါမယ် Antivirus တွေအများကြီး free ပေးတဲ့ program တွေရှိသလို ဝယ်ယူရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်....အဲ့ဒီထဲကမှ Free ware ဖြစ်ပြီး သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Program လေးနှစ်ခုကိုပေးချင်ပါတယ်....ပထမတစ်ခုကတော့ Spybot (ဒီနေရာမှာ ယူပါ) Malware တွေကို တားဆီးနိုင်သလို ရှာပြီးတော့လည်း သတ်နိုင်ပါတယ်....နောက်တစ်ခုကတော့ Ad Aware (ဒီနေရာမှာယူပါ) Free ပေးထားတဲ့ Antivirus ပါ အလကားပေးထားတာပဲဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒီကောင်လေးပဲ သုံးနေတာ (ဝယ်ပြီး သုံးရတာတွေလည်း မသုံးချင်ဘူး......ပိုက်ဆံအကုန်မခံနိုင်တာလည်း ပါတာပေါ့း)....
(၂) အသုံးမပြုတော့တဲ့ program နဲ့ File တွေကို Delete လုပ်ပါ...... အသုံးမပြုတော့တဲ့ windows components တွေကို ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားပြီး ရှင်းပါ start>settings>control panel>add or remove programs>add/remove windows components.....
(၃) ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားပြီး disk cleanup လုပ်ပေးပါ start>all programs>accessories>system tools>disk cleanup ........
(၄) hard drives ကို Defragment လုပ်ပေးပါ ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားပါ start>all programs>accessories>system tools>disk defragmenter......
အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေ လုပ်ဘို့ အချိန်အများကြီးမပေးရသလို အရမ်းလည်း အပန်းမကြီးပါဘူး.......ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးနိုင်လေ System အတွက် ကောင်းလေပါပဲ........။
Posted by ညီညီ at 4:19 PM No comments:
Internet browser တွေ စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်နောက်ဆုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ Browsing session အတိုင်းပြန်ရအောင်
Internet Browser တွေမှာ ဘယ်လို setting လုပ်မလဲ သိတဲ့သူတွေလည်း ကျော်သွားလိုက်ပေါ့...မသိတဲ့သူတွေဖတ်ပေါ့ဗျာ......။
Browser ကိုစတာနဲ့ နောက်ဆုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ last browsing session Tab တွေအတိုင်း ရအောင် အောက်မှာ ရှင်းပြပေးပါမယ်...။
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ Mozilla ဖွင့်တာနဲ့ အနည်းဆုံး Tab က လေးခုပဲ Gmail,Blog,facebook နှင့် တစ်ခြား Website အနည်းဆုံး တစ်ခုကနေ သုံးခုလောက်ထိတစ်ခါးတည်းဖွင့်ပစ်လိုက်တယ်...တစ်ခါတစ်လေကျတော့ မှားပြီး ပိတ်မိတာရှိတယ်...ဒါမှမဟုတ်လည်း စက်က Restart ကျတာရှိတယ်....အဲ့လိုဖြစ်သွားရင် စောစောက ဖွင့်ထားတာတွေ တစ်ခုခြင်းဆီ ပြန်ပြီးလိုက်ဖွင့်နေရရင် အလုပ်က မဟုတ်သေးဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ဒီ Setting လုပ်ထားဖြစ်တာ.......။
ပုံထဲကအတိုင်း Option ကို ကလစ်လိုက်ပြီ.........
When Firefox start မှာ ပုံထဲကအတိုင်း Show my windows and tsbs from last time ကိုကလစ်ပေးပြီး OK လိုက်ရင်ရပါပြီ........။
ပုံထဲကအတိုင်း Setting ကိုသွား.........။
On start up...
ပုံထဲကအတိုင်း Continue where i left off ကို check ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ........။
ပုံထဲကအတိုင်း setting==>Preferences ကိုကလစ်ပါ........။
ပုံထဲကအတိုင်း Continue from last time ကလစ်ပြီး OK လိုက်ရင်ရပါပြီ..........။
Gear icon ကိုကလစ်ပြီး ပုံထဲကအတိုင်း Preferences ကိုကလစ်ပါ........။
ပုံထဲကအတိုင်းပဲ Safari opens with မှာ All windows from last session ကိုကလစ်ပြီး OK လိုက်ရင်ရပြီ...။
IE မှာတော့ ဒီ Option က အပေါ်ကကောင်တွေလောက်မလွယ်ဘူး လုပ်လို့တော့ရတယ်....။
ပုံထဲကအတိုင်း New Tab Button ကိုကလစ်ပါ...
ပုံထဲကအတိုင်း Reopen last session ကိုကလစ်ရင်ရသလို........။
Internet Option ကိုသွားမယ်..........
ပုံထဲကအတိုင်း Homepage မှာ about:tabs လို့ရိုက်ထည့်ပေးပြီး OK လိုက်ပါ................။
Posted by ညီညီ at 5:45 PM No comments:
windows7နှင့် windows vista မှ my computer ကို taskbar မှာ ဘယ်လို Add လည်း
သိတဲ့သူတွေလည်း သိပါတယ်......မသိတဲ့သူတွေလည်း မသိဘူးပေါ့......။
မေးလ်ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ်....computer menu ကို taskbar မှာထားချင်တယ် အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ဗျ......။
computer မှ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်အမြဲ သုံးနေကျ Folder တွေကိုလည်း ဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်း taskbar မှာ Add လုပ်လို့ရပါတယ်....လွယ်လွယ်လေးပါ........။
Taskbar ပေါ်မှာ Right Click ပြီး ပုံထဲကအတိုင်း Toolbars===>New Toolbar ကိုကလစ်........။
Computer ကို add မှာဆိုတော့ computer ကိုကလစ်===> Select Folder ကိုကလစ်......။
ပုံထဲက အတိုင်း computer ဘေးက မျှားလေးပေါ်မှာ ကလစ်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ pop up menu ထဲကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Drive သို့ Folder ထဲကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး ဝင်သွားနိုင်ပြီပေါ့........။
Posted by ညီညီ at 2:58 PM 1 comment:
windows7password reset disc တစ်ခုဖန်တီးခြင်း
များသောအားဖြင့်တော့ password ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်တွေနဲ့ Windows ပြန်တင်းပြီးစ အချိန်တွေမှာ password အသစ်ကို မမှတ်မိလို့ ဖြစ်ကြရတာများပါတယ်.......။
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ Windows7မှာ password မေ့နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်လို့ password ကို remove လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ် password reset disc တစ်ခု အလွယ်တစ်ကူ ဖန်တီးဘို့ ဒီ Application က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်......။
ဒီကောင်လေးက password reset disc ကို CD/DVD အပြင် USB နဲ့လည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်....CD/DVD Drive မရှိတဲ့ စက်တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားတာပေါ့....။
ဒီနေရာကို သွားပြီး Trial နဲ့ Download ယူလိုက်ပါ....။
(၁) password unlocker ကို run ပါ........။
(၂) password reset disc ကို CD/DVD နဲ့ဖန်တီးမလား USB နဲ့ဖန်တီးမလား....CD/DVD နဲ့ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ CD သို့ DVD အလွတ်တစ်ချပ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီး Burn CD/DVD ကိုကလစ်ပြီးစောင့်ပေးလိုက်ပါ ......USB နဲ့ ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ Burn USB ကိုကလစ်ပေါ့....Burning disc complete ဆိုပြီး dialogue box လေးတက်လာရင်တော့ burn လို့ ပြီးသွားပါပြီ.....။
(၃) password reset disc နဲ့ Boot တက်ပါ....password reset လုပ်မည့် account ကိုကလစ်ပြီး reset ကိုကလစ်ပါ.....တက်လာတဲ့ box လေးအထဲက Yes ကိုကလစ်ပါ........password reset successfully ဆိုတဲ့ dialogue box လေးတက်လာပါမယ် Ok ကလစ်ပါ....။
(၄) reboot ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ......user ကိုကလစ်ပြီး ဝင်သွားရုံပါပဲ.........။
Posted by ညီညီ at 1:35 PM No comments:
Photo Editing Software လေးပါ သုံးတာကတော့ run လိုက်တာနဲ့ Start up မှာ Video လေးနဲ့ရှင်းပြပေးတယ်...။
ပိန်နေတဲ့ပါးလေးတွေ ဖောင်းသွားအောင်တို့......ကောက်နေတဲ့နှာတံလေး ဆွဲပြီးဖြောင့်တာတို့ အပြင် မိက်ကပ်တွေ နှုတ်ခမ်းနီတွေလည်း ဆိုးလို့ရသေးတယ်......:)
profile ပုံ လန်းလန်းလေးတွေ တင်ချင်ကြတဲ့သူတွေကတော့ ယူလိုက်ဦးပေါ့..........:P
Size ကတော့ 6.37 MB ပဲရှိပါတယ်......။
Antivirus ကိုပိတ်ထားပြီးမှ ဖိုင်ကိုဖြည်ပါ အထဲမှာ Crack ဖိုင်ပါလို့ပါ Crack တွေ Patch တွေဆိုရင် Antivirus တွေက Virus အထင်နဲ့ ဝါးပစ်တက်ကြလို့ပါ........။
ဖိုင်ဖြည်ပြီးရင် Photoinstrument ကို Install လုပ်ပါ Photoinstrument ကို ပြန်ပိတ်ထားပါ........ပြီးရင် Crack ကို Copy လုပ်ပါ C://Windows====>program files====>Photoinstrument ရဲ့ Folder ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်ပါ ပြီးမှ Photoinstrument ကိုဖွင့်ရင် Active လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်.... Text file ထဲမှာပါတဲ့ Email နဲ့ Key ကို ယူပြီး Active လုပ်ပေးလိုက်ပါ.......ဂွမ်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေ လန်းသွားအောင် ပြင်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်.......:P
Posted by ညီညီ at 1:58 PM2comments:
..... လိုချင်သော software များ..c box မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်......
လစာအသင့်တင့်နဲ့ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်းနဲ့ မလေးရှားမှာနေထိုင်တယ်... အားလပ်ချိန်တွေ စာဖတ်၊စာရေးရင်းနဲ့ ကိုယ်သိတာတွေလည်း တစ်ခြားသူတွေကို မျှဝေ တစ်ခြားသူတွေမျှဝေ ထားတာတွေကိုလည်း လေ့လာပေါ့...
just my first step!!! :)
Paypal casino Poker Online Casino SOCCER MANAGER eucasino
နားထောင်နေတဲ့သီချင်းလေး..
systems ကို အမြဲတမ်းမြန်ဆန်နေအောင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင...
Audio cuter (1)
Audio Editting (1)
Burning Tool (7)
Driver check (1)
Folder Locker (4)
pc care (6)
photo editting (4)
ကဗျာ (သီချင်း) (1)
ီDVD Ripper (1)
Folder Lock 6.2.5-serial
Folder Lock 6.2.5-+serial Folder Lock 6.2.5.123 ဒီမှာယူဗျာ ကဲ folder တွေနဲ့ memory stick တွေကို lock ချကြမယ်ဆိုတော့ တင်ပေးထားတဲ့ US...
Adobe pagemaker 7.0 +Serial
ဒါကတော့ Adobe pagemaker 7.0 ပါ မနေ့ Comment ကနေထောင်းတာတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက်ရော လိုချင်တဲ့သူတွေပါ Download လုပ်ယူလိုက်ကြပါ....။ ဘာလုပ်တဲ့ S...
DVD Ripper ကောင်းကောင်းလေး...
Xilisoft DVD Ripper Ultimate ဒါကတော့ DVD ထဲက Video,Audio ဖိုင်တွေကို တစ်ခြား digital devices တွေဖြစ်တဲ့ Mp3 player,Mp4 player,ipod,Phone...
ကွန်ပျုတာသုံးတဲ့သူ တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ်လောက်ကတော့ ကွန်ပျုတာကို နင်းကန်ခွသုံးဘိုလောက်ပဲသိပြီး လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လုပ်ဘို့ကိုတော့ ပျ...